Mitombo cucumbers ao amin'ny trano fonenana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Mitombo cucumbers ao amin'ny trano fonenana
Ahoana ny famokarana cucumbers ao amin'ny trano fonenana
Misaotra noho ny tsy fisehoana, ny fitomboana haingana sy ny kôkômbinina dia hita any amin'ny saha rehetra sy any amin'ny firenena maro. Satria ity dia iray amin'ireo legioma izay mampitolagaga ao anaty trano fonenana iray, dia iray amin'ireo voalohany miditra amin'ny sakafo isika aorian'ny ririnina tsy misy vitamina. Ny kôkômbia, izay tsy mitovy amin'ireo voankazo hafa, dia tsy afaka mirehareha amin'ny maha-sakafo mahavelona azy ho an'ny olombelona.
Oviana ny vozon'ny sakamalao manodina mavo: antony
Ny fotoam-pambolena dia tsy ny fifaliana fotsiny amin'ny fijinjana, fa koa ny olana sasany. Eritrereto ny antony mahatonga ny kôkômera ho lasa mavo amin'ny trano fonenana ary inona no tokony hatao. Ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny tany Ny tany ao amin'ny trano fonenana dia mety mahantra amin'ny fitrandrahana mineraly, izay miteraka fanariana. Miaraka amin'ny tsy fisian'ny tazo voajanahary aloha dia manjelanjelatra, ary manova ny lokon'ny làlan-dry zareo ary ny elanelana eo anelanelan'izy ireo.
Mitombo cucumbers avy amin'ny voa ao anaty trano fonenana
Ny famokarana kôkôma ao anaty trano fambolena voajanahary dia mety hampidi-doza maro be. Na izany aza, maro ny mpamboly manatona an'io fomba io satria io no fotoana faran'izay kely indrindra raha oharina amin'ny fomba fametrahana. Mba hahazoana fijinjana be dia be ary manamaivana ny mety hitranga dia zava-dehibe ny manaraka ny tolo-kevitra sasantsasany, manomboka amin'ny fisafidianana ny voa sy ny fiomanana.
Ahoana ny hiatrehana ny famoahana ny kôkôma ao amin'ny trano fonenana
Ny ravinkazo mihosotra dia ny olana mahazatra indrindra ho an'ny mpamboly izay mitombo cucumbers ao amin'ny trano fonenana. Avy amin'ny lahatsoratrareo, hianaranao ny antony mahatonga izany, ary koa ny fomba hiadiana amin'io trangan-javatra io sy ny fisorohana azy mba ahafahan'ny voankazo ho salama tsara ary mitondra vokatra tsara. Fihetseham-po noho ny aretina Na dia bitika kely fotsiny aza ny angadrano, ny iray amin'ireo antony mahatonga ny kôkômbra mandondona ao amin'ny trano fivoahana dia ny fisian'ny aretina.
Sakadia mahasoa ao anaty trano fonenana
Ny famokarana herinaratra dia mitaky fandanjana ny tany sy ny mari-pahaizana amin'ny rivotra, ary koa ny fanaraha-maso ny haavon'ny haavon'ny lanitra. Manana hazavana sy hafanana be dia be ity kolontsaina legioma ity, ka ny fandroana rano dia ny dingana lehibe indrindra amin'ny fikarakarana. Tena marina izany ho an'ny fambolena legioma ao amina trano fisotroana. Ny ankamaroan'ny mpanao zaridaina sy ny zaridaina, noho ny toetran'ny fironan'ny firenentsika, dia mampiasa fonjan-tavoahangy polycarbonate, noho izany, mba hahazoana vokatra be dia be, ilaina ny mandinika ireo fitsipika fototra sy ny toetran'ny firoborobon'ny kôkômera.
Ahoana ny fomba hanamafisana ireo cucumbers ao anaty trano fonenana
Ny kôkômba mahazatra dia herintaona isan-taona, karazana fako maro, ary indraindray mahatratra 2 metatra ny halavany. Raha eny an-tsaha dia miparitaka eny amin'ny farafara ny karavasy, misy hazavana ampy ny zavamaniry, noho izany dia tsy zava-dehibe ny halavan'ny elatra sy ny lanjany. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny fahazavana dia tsy ampy ho an'ny zavamaniry, ny ravina dia hiverina mavo, ny fako manomboka mamony, ary ny voankazo dia mavo, mihodina ary tsy manome ranon-javatra.
Nahoana ny ravin'olom-bolo no mivadika ho mavo ary ahoana no ahafahantsika mamelona ireo zavamaniry mba hanafoanana ny antony
Rehefa miala ny kôkômbita, vao omaly sy maitso, dia nanomboka nivadika mavo, dia mila mandray fepetra maika mba hamonjena ilay orinasa. Soritr'aretina mafy izany, ka tsy azo odian-tsy hita izany. Eritrereto ny antony nahatonga ireo fiovàna tsy manintona amin'ny loko maitso amin'ny ravin'akoho sy ny fomba hiatrehana izany.
Ahoana ny fomba famolena araka ny tokony ho izy ny cucumbers ao amin'ny trano fonenana
Nanapa-kevitra ny hamboly legioma na voankazo ho an'ny tenany manokana ny mpamboly maniry iray, izay manana alim-borona maro sy tsiambaratelo izay mila hianatra sy hifehezana, satria miankina amin'izy ireo ny habeny sy ny kalitaon'ny vokatra. Ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hanatsarana ireo endriky ireo rehefa mitombo ny kôkômbinina any amin'ny trano fonenana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Mitombo cucumbers ao amin'ny trano fonenana